Kedu ihe bụ CTO? | Martech Zone Mkpebiri
Martech Zone » Mkpebiri » Acronyms na-amalite na T	» CTO
CTO bụ okwu mkpọ okwu maka Chief Technology officer.
Onye isi teknụzụ, onye isi ọrụ teknụzụ, ma ọ bụ ọkà mmụta teknụzụ, bụ ọkwa onye isi na ụlọ ọrụ nke ọrụ ya lekwasịrị anya na njikwa, mmejuputa, na ọhụụ nke iji teknụzụ n'ime ụlọ ọrụ. A na-akpọ ọrụ a mgbe ụfọdụ CIO.
CTO bụ okwu mkpọ okwu maka Pịa Iji Mepee.
Ọnụego pịnye ka imeghe bụ ọnụọgụ ọpịpị sitere na ọnụọgụ ozi-e meghere karịa ọnụọgụ ozi-e ewepụtara. Metiriki a na-enye nzaghachi maka ka imewe na ozi siri gbasa ndị na-ege gị ntị ebe ọ bụ na ịpịrị ndị a sitere na ndị na-elele email gị n'ezie. Mbibiri ọzọ bụ CTOR.